Usoro ọrụ - Bayu The Label
A na-ejikwa weebụsaịtị a ỌTỤTỤ ỤWA N'ỤWA. BABỤ LABEL bụ akara nke ejiri ỌTỤTỤ ỤWA N'ỤWA. Na saịtị ahụ, okwu "anyị", "anyị", "IWE" na "anyị" na-ezo aka ỌTỤTỤ ỤWA N'ỤWA. ỌTỤTỤ ỤWA N'ỤWA na-enye weebụsaịtị a, gụnyere ozi niile, ngwá ọrụ na ọrụ dị site na saịtị a, gị onye ọrụ, na-adabere na ịnakwere nke okwu niile, ọnọdụ, atumatu na ọkwa dị na ebe a.
Site na ịga na saịtị anyị na / ma ọ bụ ịzụta ihe n'aka anyị, ịbanye na "Ọrụ" anyị ma kwenye na agbanyere gị na usoro na ọnọdụ ("Usoro nke Ọrụ", "Usoro"), gụnyere ndị ọzọ na ọnọdụ na iwu ndị ọzọ. edebara ya na / ma ọ bụ dị site hyperlink. Usoro Okwu a na-emetụta ndị ọrụ niile nke saịtị ahụ, gụnyere ndị na-enweghị njedebe ndị ọrụ bụ ndị na-eme nchọgharị, ndị na-ere ahịa, ndị ahịa, ndị ahịa, na / ma ọ bụ ndị na-akwado ọdịnaya.
Biko gụọ ihe ndị a Okwu Service ọma tupu ịnweta ma ọ bụ iji anyị website. Site na ịnweta ma ọ bụ iji ihe ọ bụla akụkụ nke saịtị, ị na-ekweta-agbụ ndị a Okwu nke Service. Ọ bụrụ na ị na-ekweta na ihe niile usoro na ọnọdụ nke ndu a, mgbe ahụ ị nwere ike ịnweta website ma ọ bụ iji ihe ọ bụla ọrụ. Ọ bụrụ na ndị a Okwu-Service na-ahụta ihe na-enye, a nara expressly ejedebeghị na ndị a Okwu-Service.
Ọhụrụ ọ bụla atụmatụ ma ọ bụ ngwaọrụ nke na-agbakwunyere na ugbu a ahịa ga--n'okpuru Okwu nke Service. Ị nwere ike inyocha ihe ndị kasị ugbu a version nke Okwu nke Service n'oge ọ bụla na peeji a. Anyị na-doputa ikike imelite, ịgbanwe ma ọ bụ dochie bụla nke ndị a Okwu-Service site ikenye mmelite na / ma ọ mgbanwe anyị website. Ọ bụ ọrụ gị nyocha nke a na peeji nke oge maka mgbanwe. Gị wee na ojiji nke ma ọ bụ ohere na website na-eso ikenye nke ọ bụla mgbanwe kasị nabata mgbanwe ndị ahụ.
Anyị na-echekwa ụlọ ahịa anyị na Squarespace, Inc. Ha na-enye anyị ụlọ ọrụ ịntanetị ịntanetị nke na-enye anyị ohere ịre gị ngwaahịa na ọrụ anyị.
Nkebi 1 - ONLINE echekwa usoro
Site n'ikwere ihe ndị a Okwu nke Service, ị na-anọchi anya na ị na-ọ dịkarịa ala, afọ ọtụtụ gị ala ma ọ bụ ógbè nke obibi, ma ọ bụ na ị na-afọ nke ọtụtụ gị ala ma ọ bụ ógbè nke obibi na i nyere anyị nkwenye gị na ekwe ọ bụla nke gị obere dependents iji saịtị a.
Ị nwere ike iji anyị na ngwaahịa ọ bụla iwu na-akwadoghị ma ọ bụ n'enweghị ikike nzube ma ọ bụ nwere ike ị, na ojiji nke Service, emerụ ọ bụla iwu gị ikike (gụnyere ma na ọnweghị oke nwebisiinka iwu).
Unu na-agaghị na-ebunye ọ bụla ikpuru ma ọ bụ nje ma ọ bụ ihe ọ bụla koodu nke a na-ebibi uwa.
A iro ma ọ bụ mebiri nke ọ bụla nke Okwu ga-eme ihe ozugbo nchupu gị Services.
Nkebi 2 - General ỌNỌDỤ
Anyị na-doputa ikike ịjụ ọrụ onye ọ bụla n'ihi ihe ọ bụla n'oge ọ bụla.
Ị ghọtara na gị ọdịnaya (ọ bụghị gụnyere kaadị ozi), nwere ike a ga-agafere unencrypted na-agụnye (a) transmissions n'elu dị iche iche na netwọk; na (b) mgbanwe ime na imeghari oru chọrọ nke na njikọ na netwọk ma ọ bụ ngwaọrụ. Kaadị ozi na-mgbe ezoro ezo mgbe nyefe n'elu netwọk.
Ị na-ekweta ghara mụta nwa, oyiri, oyiri, na-ere, resell ma ọ bụ na-erigbu akụkụ ọ bụla nke Service, ojiji nke Service, ma ọ bụ ohere na Service ma ọ bụ ihe ọ bụla na kọntaktị na website site na nke ọrụ a na-nyere, na-enweghị egosi dere ikike site anyị .
The aga eji na a nkwekọrịta na-gụnyere maka ndirinfe naanị na agaghị amachi ma ọ bụ n'ụzọ na-emetụta ndị a Okwu.
Nkebi 3 - ziri ezi, Oke na ọbịbịa OF OZI
Anyị abụghị ndị na ọrụ ma ọ bụrụ na ozi ka dị na saịtị a bụ ezi, zuru ezu ma ọ bụ ugbu a. The ihe onwunwe na saịtị a na-nyere maka ozi izugbe naanị na-ekwesịghị ịdabere n'ebe ma ọ bụ mee ihe dị ka nanị ihe ndabere maka na-eme mkpebi na-enweghị agba izu na isi, ihe ezi, zuru ezu karị, ma ọ bụ karịa adọ isi nweta ihe ọmụma. Ọ bụla na-adabere n'ebe ihe a na saịtị bụ na gị onwe gị n'ihe ize ndụ.
Saịtị a nwere ike ịnwe ụfọdụ mere eme. Ya mere eme, bụchaghị, ọ bụghị ugbu a na-nyere maka naanị. Anyị na-doputa ikike gbanwee ọdịnaya nke saịtị a n'oge ọ bụla, ma anyị enweghị ọrụ imelite ozi ọ bụla na anyị na saịtị. Ị na-ekweta na ọ bụ gị na ọrụ nyochaa mgbanwe anyị na saịtị.
Nkebi 4 - mgbanwe na ọrụ ahụ, Ahịa
Ego maka anyị na ngwaahịa bụ isiokwu ịgbanwe-enweghị amamọkwa.
Anyị na-doputa ikike n'oge ọ bụla gbanwee ma ọ bụ kwụsị Service (ma ọ bụ ihe ọ bụla akụkụ ma ọ bụ ọdịnaya ya) na-enweghị amamọkwa n'oge ọ bụla.
Anyị agaghị-atụba ya na ị ma ọ bụ na-ọ bụla atọ ọzọ maka ihe ọ bụla mgbanwe, price mgbanwe, nkwusioru ma ọ bụ discontinuance nke Service.
Nkebi 5 - ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ (ma ọ bụrụ na ọdabara)
Ụfọdụ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nwere ike idị nanị online site na website. Ndị a na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nwere ike ịnwe mmachi quantities na bụ isiokwu laghachi ma ọ bụ mgbanwe naanị dị ka anyị laghachi iwu.
Anyị na-agbalịsi na-egosipụta dị ka n'ụzọ ziri ezi dị ka omume ndị na agba na ihe oyiyi nke anyị na-egosi na ụlọ ahịa. Anyị nwere ike ekwe nkwa na kọmputa gị ileba anya nke ngosi nke ọ bụla na agba ga-ezi ezi.
Anyị na-doputa nri, ma Ọ bụghị iwu, amachi ahịa nke anyị ngwaahịa ma ọ bụ Services ọ bụla onye, ​​biri ma ọ bụ ikike. Anyị nwere ike ime ihe a nri on a ikpe-site-ikpe-adabere. Anyị na-doputa ikike amachi quantities nke ọ bụla na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị na-enye. All nkọwa nke ngwaahịa ma ọ bụ ngwaahịa ịnye ọnụahịa bụ isiokwu ịgbanwe na oge obula na-enweghị amamọkwa, na ezi uche nke anyị n'ọbụ. Anyị na-doputa ikike ịkwụsị ọ bụla a na n'oge ọ bụla. Ọ bụla-enye maka ihe ọ bụla ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ mere a na saịtị bụ chakoo ebe amachibidoro.
Anyị na-adịghị akwukwo ikpe na àgwà nke ọ bụla ngwaahịa, ọrụ, ozi, ma ọ bụ ndị ọzọ na ihe onwunwe zụrụ ma ọ bụ enwetara site na ị ga-enwe atụmanya, ma ọ bụ na ihe ọ bụla na njehie na Service ga-gbazie.
Nkebi 6 - ziri ezi nke Ịgba Ụgwọ na Akaụntụ OZI
Anyị na-doputa ikike ịjụ ihe ọ bụla ka ị na-edebe na anyị. Anyị nwere ike, anyị naanị ezi uche, naanị ma ọ bụ kagbuo quantities zụrụ kwa onye, ​​kwa ulo-ma ọ bụ kwa ka. Ndị a mgbochi pụrụ ịgụnye iwu enịm site ma ọ bụ n'okpuru otu ahịa na akaụntụ, otu kaadị, na / ma ọ iwu na-eji otu ozi ịgba ụgwọ na / ma ọ bụ mbupu adreesị. Ke edinam na anyị na-eme mgbanwe ka ọ bụ kagbuo iwu, anyị nwere ike ịchọ gwa gị site na ịkpọtụrụ ndị e-mail na / ma ọ adreesị ịgba ụgwọ / nọmba ekwentị nyere n'oge na iji e mere. Anyị na-doputa ikike amachi ma ọ bụ gbochie iwu ka, na anyị n'ọbụ ikpe,-apụta na-enịm site na-ere ahịa, resellers ma ọ bụ ndị nkesa.
Ị na-ekweta na-enye ugbu a, zuru ezu na ezi zuo na ozi akaụntụ maka niile ịzụrụ mere na anyị ụlọ ahịa. Ị na-ekweta n'egbughị oge imelite akaụntụ gị na ozi ndị ọzọ, gụnyere adreesị email na nọmba kaadị na ngafe ụbọchị, nke mere na anyị nwere ike mezue gị azụmahịa na kpọtụrụ gị dị ka mkpa.
Ihe zuru ezu, biko nyochaa anyị alaghachi Policy.
Nkebi 7 - Nhọrọ ngwaọrụ
Anyị nwere ike nye gị ohere-atọ ndị ọzọ ngwaọrụ n'elu nke anyị ma nyochaa ma ọ bụ ihe ọ bụla akara ma ọ bụ ndenye.
Ị kwetara ma kweta na anyị na-enye ohere maka ụdị ngwá ọrụ ndị ahụ "dị ka" na "dịka dịnụ" na-enweghị akwụkwọ ikike ọ bụla, ihe nnọchiteanya ma ọ bụ ọnọdụ nke ụdị ọ bụla na-enweghị nkwado ọ bụla. Anyị agaghị enwe ụgwọ ọ bụla na-esite na ma ọ bụ na-ejikọta maka iji ihe ngwaọrụ ndị ọzọ.
Uru ọ bụla site gị nke nhọrọ ngwaọrụ awa site na saịtị bụ kpamkpam na gị onwe gị n'ihe ize ndụ na ezi uche na i kwesịrị ịgba mbọ hụ na na ị maara na na mma okwu ndị na nke ngwaọrụ na-nyere site na mkpa atọ ọzọ na-eweta (s).
Anyị nwekwara ike, na-eme n'ọdịnihu, enye ọhụrụ ọrụ na / ma ọ bụ atụmatụ site na website (gụnyere, ntọhapụ nke ọhụrụ ngwá ọrụ na ego). Dị otú ahụ ọhụrụ atụmatụ na / ma ọ bụ ọrụ ga--n'okpuru ndị a Okwu-Service.
Nkebi 8 --atọ ndị ọzọ njikọ
Ụfọdụ ọdịnaya, ngwaahịa na ọrụ dị site na anyị Service pụrụ ịgụnye ihe si atọ-ọzọ.
-Atọ ndị ọzọ njikọ na saịtị a nwere ike gị aka atọ ndị ọzọ weebụsaịtị na-adịghị mmekọ na anyị. Anyị abụghị ndị na-ahụ maka n'inyocha ma ọ bụ na-eleru ọdịnaya ma ọ bụ izi ezi na anyị na-adịghị ikike na ga-enweghị ọ bụla ibu ma ọ bụ ibu ọrụ n'ihi na ọ bụla atọ ọzọ ihe ma ọ bụ weebụsaịtị ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ihe, ngwaahịa, ma ọ bụ ọrụ nke atọ-ọzọ.
Anyị abụghị ndị dara iwu maka ihe ọ bụla nsogbu ma ọ bụ na-emebi metụtara nke Ịzụ ma ọ bụ ojiji nke ngwaahịa, ọrụ, ihe onwunwe, ọdịnaya, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ azụmahịa mere na njikọ na ọ bụla atọ ọzọ weebụsaịtị. Biko nyochaa oma-atọ ndị ọzọ na iwu na omume na-eme ka n'aka na ị na-aghọta ha tupu ị na-arụ ọ bụla azụmahịa. Mkpesa, na-ekwu, nchegbu, ma ọ bụ ajụjụ banyere-atọ ndị ọzọ na ngwaahịa ga-eduzi ndị na-atọ ndị ọzọ.
Nkebi 9 - ọrụ kwuru, nzaghachi na ndị ọzọ na nnyefe
Ọ bụrụ na, mgbe anyị arịrịọ, ị na-eziga ụfọdụ kpọmkwem nnyefe (atụ zoo Ndenye) ma ọ bụ enweghị a arịrịọ si anyị ị na-eziga ihe echiche, na aro, amụma, atụmatụ, ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ, ma online, site na email, site nzi ozi mail, ma ọ bụ n'ụzọ (ịgụnye, 'comments'), ị na-ekweta na anyị nwere ike, n'oge ọ bụla, na-enweghị mmachi, dezie, oyiri, na-ebipụta, kesaa, ịsụgharị na n'ụzọ ndị ọzọ na-eji na ọ bụla na-ajụ ihe ọ bụla kwuru na ị na-atụ anyị. Anyị bụ ndị na ga-abụ ọ bụghị iwu na (1) ịnọgide na-enwe ihe ọ bụla kwuru na obi ike; (2) akwụ ụgwọ maka ihe ọ bụla kwuru; ma ọ bụ (3) ime ihe ọ bụla kwuru.
Anyị nwere ike, mana anyị enweghị ibu ọrụ, nyochaa, dezie ma ọ bụ wepu ọdịnaya anyị kpebiri na naanị otu uche anyị bụ ihe iwu akwadoghị, mkparị, iyi egwu, nkwanye ùgwù, nkwulu, ikiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ, ihe rụrụ arụ ma ọ bụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụ mebie ikike ọgụgụ isi ọbụla ma ọ bụ Usoro Ọrụ .
Ị kweere na gị kwuru gaghị emebi ọ bụla nri nke ọ bụla atọ ọzọ, gụnyere nwebisiinka, edenyere, nzuzo, ma ọ bụ ndị ọzọ na onye ma ọ bụ proprietary nri. Gị n'ihu ekweta na gị ihe ga ịba libelous ma ọ bụ n'ụzọ iwu akwadoghị, okwu mkparị ma ọ bụ okwu rụrụ arụ ihe onwunwe, ma ọ bụ nwere ihe ọ bụla na kọmputa virus ma ọ bụ ndị ọzọ malware na pụrụ n'ụzọ ọ bụla emetụta ime ihe nke Service ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri website. I nwere ike iji a ụgha e-mail address, eme nnọọ ka hà na onye ọzọ onwe gị, ma ọ bụ n'ụzọ na-eduhie anyị ma ọ bụ atọ-ọzọ ka na-si malite bụla comments. Ị bụ nanị maka ihe ọ bụla comments ị na-eme na ha niile ziri ezi. Anyị na-ibu ọrụ ọ bụla na iche mba ibu maka ihe ọ bụla comments posted site gị ma ọ bụ ọ bụla atọ ọzọ.
Nkebi 10 - Ozi Nkeonwe
Gị nrubeisi nke ozi nkeonwe site na ụlọ ahịa na-achịkwa anyị Amụma nzuzo. Ele anyị Amụma nzuzo.
Nkebi 11 - njehie, adabaghị NA OMISSIONS
Mgbe ụfọdụ, a pụrụ inwe ọmụma na anyị na saịtị ma ọ bụ na Service na e dere mperi ndenye ihe wetara,-adabaghị ma ọ bụ omissions nke ahụ nwere ike metụtara ngwaahịa nkọwa, ịnye ọnụahịa, n'ọkwá, na-enye, ngwaahịa mbupu ebubo, n'ụzọ ụfọdụ na nnweta. Anyị na-doputa nri iji gbazie ọ bụla njehie,-adabaghị ma ọ bụ omissions, na ịgbanwe ma ọ bụ imelite ozi ma ọ bụ kagbuo iwu ma ọ bụrụ na ozi ọ bụla na Service ma ọ bụ na ihe ọ bụla yiri website ugbua, ezughi n'oge ọ bụla n'amaghị ọkwa (gụnyere mgbe unu rubere gị iji) .
Anyị na-eme ọ dịghị ọrụ imelite, dozie ma ọ bụ dokwuo anya ọmụma na Service ma ọ bụ na ihe ọ bụla yiri website, gụnyere na-enweghị mmachi, ịnye ọnụahịa ọmụma, ma e wezụga dị ka iwu kwuru. Ọ dịghị kpọmkwem melite ma ọ bụ nwee ume ụbọchị etinyere na Service ma ọ bụ na ihe ọ bụla yiri website, kwesịrị iwere na-egosi na ozi niile dị na Service ma ọ bụ na ihe ọ bụla yiri website e gbanwetụrụ ma ọ bụ emelitere.
Nkebi 12 - aju eji
Ke adianade ọzọ ukpan dị ka e depụtara na Okwu nke Service, ị na-aju si eji saịtị ma ọ bụ ọdịnaya: (a) maka ihe ọ bụla na iwu akwadoghị nzube; (B) na-arịọ ha ndị ọzọ ịrụ ma ọ bụ na-ekere òkè ọ bụla na iwu akwadoghị omume; (C) na-emerụ ihe ọ bụla mba, gọọmenti etiti, n'ógbè ma ọ bụ ala ụkpụrụ, iwu, iwu, ma ọ bụ obodo nile; (D) na imegide ikike ime nhọrọ n'elu ma ọ bụ na-emerụ anyị ikike arịa amamihe ma ọ bụ ndị ikike arịa amamihe nke ndị ọzọ; (E) na-amaja, mmetọ, ịkparị, nsogbu, akparịkwa, nkwutọ, kparịa, ịmaja, ma ọ bụ ịkpa ókè dabere na okike, mmasị ịkwa iko, okpukpe, agbụrụ, agbụrụ, afọ, mba o, ma ọ bụ nkwarụ; (F) n'okpuru ụgha ma ọ bụ na-eduhie eduhie ozi; (G) bulite ma ọ bụ na-ebunye nje ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ụdị obi koodu nke ga-ma ọ bụ ike ga-eji n'ụzọ ọ bụla nke ga-emetụta arụmọrụ ma ọ bụ ime ihe nke Service ma ọ bụ nke ọ bụla yiri website, ndị ọzọ na weebụsaịtị, ma ọ bụ ndị Internet; (H) na-anakọta ma ọ bụ soro ndị ozi nkeonwe nke ndị ọzọ; (I) ka spam, phish, pharm, pretext, ududo, iri ari, ma ọ bụ bechapu; (J) maka ihe ọ bụla okwu rụrụ arụ ma ọ bụ omume rụrụ arụ nzube; ma ọ bụ (k) igbochi ma ọ bụ circumvent nche atụmatụ nke Service ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri website, ndị ọzọ na weebụsaịtị, ma ọ bụ Internet. Anyị na-doputa ikike chupu ojiji nke Service ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri website maka imebi ihe ọ bụla nke machibidoro ojiji.
Nkebi 13 - Disclaimer OF warranties; Mmachi nke ibu
Anyị anaghị ekwe nkwa, na-anọchi anya ma ọ bụ akwukwo ikpe na ojiji nke ozi anyị ga-Iweputa,-adọ, ala ma ọ bụ njehie-free.
Anyị na-adịghị akwukwo ikpe na-arụpụta nke a na-enwetara site na ojiji nke ọrụ ga-ezi ezi ma ọ bụ pụrụ ịdabere na.
Ị kweere na site n'oge ruo n'oge anyị nwere ike wepu ọrụ n'ihi ebighị ebi oge ma ọ bụ kagburu ọrụ n'oge ọ bụla, na-enweghị amamọkwa gị.
Ị expressly ekweta na ojiji nke, ma ọ bụ enweghi ike iji, ọrụ bụ na gị naanị n'ihe ize ndụ. The ọrụ na niile na ngwaahịa na ọrụ nyefere gị site na ọrụ na-(ma e wezụga dị ka expressly kwuru site anyị) nyere 'dị ka bụ' na 'dị ka dị' maka ojiji, enweghị ihe ọ bụla yiri, warranties ma ọ bụ ọnọdụ nke ụdị ọ bụla, ma awara awara ma ọ bụ echiche, gụnyere ihe nile echiche warranties ma ọ bụ ọnọdụ nke merchantability, merchantable quality, mma maka otu nzube, anwụ ngwa ngwa, aha, na ndị na-abụghị ịda iwu.
Ọ nweghị ikpe ỌTỤTỤ ỤWA N'ỤWA, ndị nduzi anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ, ndị na-enye ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ ikikere nwere ike ịdaba maka mmerụ ọ bụla, ọnwụ, nkwupụta, ma ọ bụ ihe ọ bụla, kpọmkwem, ihe ọ bụla, , gụnyere, na-enweghị njedebe uru efu, ego furu efu, ego furu efu, enweghị data, ụgwọ mgbapụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri emebi, ma ọ bụ na-adabere na nkwekọrịta, ahụhụ (gụnyere ileghara anya), ọrụ siri ike ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, na-ebili site n'iji nke ọ bụla ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla a na-eji ọrụ, ma ọ bụ maka ihe ọ bụla ọzọ metụtara na ụzọ ọ bụla iji ojiji ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla, gụnyere, ma ọ bụghị njedebe na, ọ bụla njehie ma ọ bụ ihe ọ bụla na ọdịnaya ọ bụla, ma ọ bụ ihe ọ bụla ma ọ bụ mmebi ọ bụla ụdị obiọma sitere n'aka ọrụ ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla (ma ọ bụ ngwaahịa) ezitere, transmitted, ma ọ bụ nke ọzọ mepụtara site na ọrụ ahụ, ọ bụrụgodị na ọ gwara ha ka ha nwere ike ime ya. N'ihi na ụfọdụ na-ekwu ma ọ bụ ndị ọchịchị anaghị ekwe ka mwepụ ma ọ bụ njedebe nke ọrụ maka ọdachi ma ọ bụ ọdachi, na ụlọnga ma ọ bụ ikike ndị a, ibu ọrụ anyị ga-ejedebe na iwu kachasị oke.
Nkebi 14 - INDEMNIFICATION
Ị kwenyere ikwenye, chebe na jigide nsogbu ụwa ụwa na-adịghị emerụ ahụ na ndị nne na nna anyị, ndị enyemaka anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị uweojii, ndị nduzi, ndị na-enye ọrụ, ndị na-ere ahịa, ndị na-enye ọrụ, ndị ọrụ na ndị ọrụ, gụnyere ndị ọka iwu nwere ezi uche, nke onye ọ bụla nke atọ mere ma ọ bụ na-esite na mmebi iwu gị ma ọ bụ ihe ha na-etinye na ntinye aka, ma ọ bụ mmebi nke iwu ọ bụla ma ọ bụ ikike nke ndị ọzọ.
Nkebi 15 - SEVERABILITY
Ke edinam na ọ bụla ndokwa nke ndị a Okwu-Service na-kpebisiri ike na iwu akwadoghị, chakoo ma ọ bụ unenforceable, dị ndokwa ga sina abụ enforceable ihe ruo n'ókè kwere n'iwu, na unenforceable òkè ga-e weere na a ga-enweta ndị a Okwu- Service, dị ka mkpebi ga-emetụta ndaba na enforceability nke ọ bụla ọzọ fọdụrụ ndokwa.
Nkebi 16 - nchupu
The ọrụ dị na ya ụgwọ nke ọzọ niile metere tupu nchupu ụbọchị ga-adị ndụ ndị nchupu nke a nkwekọrịta maka niile nzube.
Ndị a Okwu-Service ndị dị irè ma ọ bụrụ na ruo mgbe kwụsị site ma ị ma ọ bụ anyị. Ị nwere ike chupu ndị a Okwu-Service n'oge ọ bụla site ịgwa anyị na ị na-adịkwaghị chọrọ ka anyị jiri Services, ma ọ bụ mgbe ị kwụsị na iji anyị na saịtị.
Ọ bụrụ na anyị n'ọbụ ikpe ị na-ada, ma ọ bụ na anyị chee na ị nwere okpu, irube isi na ihe ọ bụla okwu ma ọ bụ ndokwa nke ndị a Okwu-Service, anyị nwekwara ike chupu a ndu na ihe ọ bụla na-enweghị amamọkwa na unu ga-anọgide dara iwu maka ihe niile ichekwa ya ruru elu ma tinyere na ụbọchị nke nchupu; na / ma ọ n'ihi ya pụrụ ịgọnahụ gị nweta anyị Services (ma ọ bụ ihe ọ bụla akụkụ ya).
Nkebi 17 - dum nkwekọrịta
Odida nke anyị na-egosipụta ma ọ bụ manye ọ bụla nri ma ọ bụ ndokwa nke ndị a Okwu-Service agaghi-emekwa a waiver nke ndị dị otú ahụ nri ma ọ bụ ndokwa.
Ndị a Okwu-Service na ihe ọ bụla atumatu ma ọ bụ arụmọrụ iwu posted site anyị a na saịtị ma ọ bụ na-akwanyere The Service werekwa dum nkwekọrịta na nghọta n'etiti gị na anyị na-achịkwa ojiji nke Service, superseding ọ bụla tupu ma ọ bụ contemporaneous nkwekọrịta, nkwukọrịta na amụma , ma na-edeghị ede ma ọ bụ e dere, n'etiti gị na anyị (gụnyere, ma na ọnweghị oke, ọ bụla tupu nsụgharị nke Okwu nke Service).
Ọ bụla ambiguities na akukọ-isi ihe ndị a Okwu Service agaghi-weere ihe megide drafting ọzọ ahụ.
Nkebi 18 - achị IWU
Akparịta ụka niile metụtara Njikọ Iwu a na-achịkwa ma a ga-enwe ya dịka iwu nke Netherlands. Enwee esemokwu ọ bụla si na ma ọ bụ n'ihe metụtara nkwekọrịta a ga-edo onwe ya n'okpuru ụlọ ikpe ndị dị na Hague, Netherlands, n'agbanyeghị ikike nke ịrịọ arịrịọ.
Nkebi 19 - mgbanwe usoro nke ọrụ
Ị nwere ike inyocha ihe ndị kasị ugbu a version nke Okwu nke Service n'oge ọ bụla na peeji a.
Anyị na-doputa nri, anyị naanị ezi uche, imelite, ịgbanwe ma ọ bụ dochie bụla nke ndị a Okwu-Service site ikenye mmelite na mgbanwe anyị website. Ọ bụ ọrụ gị iji chọpụta anyị website oge maka mgbanwe. Gị wee na ojiji nke ma ọ bụ ohere anyị website ma ọ bụ ndị Service na-eso ikenye nke ọ bụla mgbanwe ndị a Okwu-Service werekwa nabata mgbanwe ndị ahụ.
Nkebi 20 - Kpọtụrụ OZI
A ga-ezigara anyị ajụjụ banyere Usoro nke Ọrụ na saleservice@bayuthelabel.com.